टेलिकमको फोरजीमा १५ अर्ब घोटाला : गोकुल बाँस्कोटाले दुबईमा उँटमा चढेर गरेका थिए डिल’ ! | Diyopost
गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको अर्बौंको अर्को काण्ड
काठमाडौं, १० फागुन । सेक्युरीटी प्रीन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैयाँ घुसवार्ता गरेको अभियोगमा सुचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको मन्त्री पदच्युत भयो । स्विस कम्पनी केबिए नोटासिस का एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्रा शर्मासँगको उक्त घस वार्ताका क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले भनेका छन्,—‘त्यो मु..ले बनाएको त ३५ अर्बको छ । अब यता २७ अर्ब निस्क्यो भने २८ अर्बको बनाउनुस् ।’
उनको आशय थियो सेक्युरिटी प्रेसको एक अर्ब लागत बढाएर २८ अर्ब पुर्याउने र कमिशन बापत ७० करोड रुपैयाँ लिने । सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि फ्रान्स सरकारबाट ऋण लिने र त्यो ऋणको भारी गरिब नेपालीको थाप्लोमा थुपार्ने । तर, सेटिङ नमिलेपछि स्विस एजेन्ट भनिएका शर्माले मन्त्री बाँस्कोटाको घुष वार्ताको अडियो नै सार्वजनिक गरिदिए ।
मन्त्री बाँस्कोटा यतिबेला झण्डावाल गाडी र सेक्युरिटी गार्ड छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बालकोट स्थित नीजि घरमा गुपचुप बसिरहेका छन् ।
उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन अघि बढाएको हल्ला शुरु भएको छ । तर, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘धर्म पूत्र’को रुपमा रहँदै आएका गोकुल बाँस्कोटामाथि हात हाल्ने आँट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छ भनेर आम मानिसले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
गोकुल बाँस्कोटा समलग्न भएको दर्जनौँ भ्रष्टाचारका फेहरिस्त छन् । उनको हातमा एक खर्बभन्दा बढीको योजना थिए । ती आयोजनामा गोकुलले लामो हात नगरेहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । ती मध्ये नेपाल टेलिकमको फोरजी घोटाला एक हो ।
करीब साढे तीन अर्बमा टूजी र थ्रीजीलाई स्तरोन्नति गरेर फोरजी बनाउन चिनिया कम्पनी हुवावे तयार थियो । किन भने २ जी र ३ जी हुवावेले नै बनाएको थियो । तर, झण्डै रु. १९ अर्ब खर्चिएर ह्वावेइकै छद्म कम्पनिलाई फोरजी ठेक्का दिइयो । जसले नेपाल टेलिकमलाई ठूलो संकटमा धकेलेको छ भने ग्राहकमाथि टेलिकमले लुट मच्चाउनु परेको छ ।
१९ अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ दुई कम्पनिले एक वर्ष भित्र फोरजी सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेपनि हालसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छैन । २० माघ २०७५ मा यी दुई कम्पनिलाई सरकारले १९ अर्बको सम्झौता गरेको थियो । फोरजीको सप्लायर्ससँग डिल गर्न विवादित सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आफै दुवई पुगेका थिए । उनलाई दुबै लैजाने प्रमुख पात्र हुन् हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी ।
निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र उनी निकट नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी दुबईमा उठमा चढेर रमाईलो गर्दै
सम्झौता हुनुभन्दा दुई महिना अघि नै मन्त्री बाँस्कोटालाई लिएर डिल्ल अधिकारी सहितको टेलिकमका उच्च अधिकारी दुबई पुगेका थिए । तत्कालिन मन्त्री बाँस्कोटाले त्यतिबेला सप्लायर्ससँग मन्त्री आफैले कमिशनको डिल गरेका थिए । मन्त्री बाँस्कोटासँगै दुबई पुगेका डिल्ल अधिकारी कट्टु लगाएर उँठ चढ्दै गरेको तस्विर त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको थियो ।
नेपाल टेलिकमको भन्दा पाँच महिना ढिलो गरी नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सेया प्रदायक कम्पनी एनसेलले १८ जेठ २०७४ मा काठमाडौं, बनेपा र धुलिखेलमा फोरजी सेवा शुरू गरिसकेको छ । तर, नेपाल टेलिकमको फोरजी एक वर्ष पुरा हुँदा देशभर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । एनसेलले छिटो मात्रै गरेको होइन, नेपाल टेलिकमले १९ अर्ब खर्चेको फोरजी सेवाका लागि एसेलले भने ५ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ । एउटै प्रविधिमा १९ अर्ब खर्चिनु भनेको तत्कालिन मन्त्री गोकुल बास्कोटा र नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धकको कमिशनको चक्कर रहेको टेलिकमकै एक उच्चअधिकारी बताउँछन् ।
कमिशनकै चक्करमा फसेर टेलिकमले काठमाडौं र पोखरा बाहेकका स्थानमा विद्यमान प्रणालीलाई अपग्रेड गरेरै फोरजी सेवा दिन मानेन । तर एनसेलले भने थ्रीजी प्रणालीलाई नै अपग्रेड गरेर देशभर १ हजार भन्दा बढी स्थानमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यो संख्या यतिबेला बढेको जानकारहरु बताउँछन् । विद्यमान प्रणालीलाई नै अपग्रेड गर्नुको सट्टा मन्त्री बाँस्कोटाकै मिलेमतोमा रु.१५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुमा कमिशनकै लोभ रहेको टेलिकमकै उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘मानिसहरु ७० करोडको अडियो सुनेर हल्ला गरिरहेका छन् । यहाँ १५ अर्बको घोटाला भाईसकेको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘यहाँ भइरहेकै बेस ट्रान्सिभर स्टेशन (बीटीएस) टावर तथा प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी फोरजी चलाउन मिल्थ्यो । १५ अर्ब बढि तिर्न टेलिकम नेतृत्व र मन्त्री किन तयार भयो ? ४ अर्बमा हुने काम किन १९ अर्बमा गरियो ? उहाँले कमिशन बढाउन नै यो आर्थिक अपराध गर्नु भएको हो ।’
ती अधिकारीका अनुसार ह्वावेइले ३ अर्बमै सन् २०२३ सम्मका लागि फोर जी र फाइभजीको आधार तयार पार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘राष्ट्रको सञ्चार भनिन्छ तर, राष्ट्रलाई लुटेर टाट पल्टाउने व्यावसाय बनेको छ टेलिकम,’ ती कर्मचारी भन्दै थिए,‘पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कामिनीराज भण्डारीले यो पुरै सेटिङ मिलाएकी हुन् । तर, सेटिङ गडबढ हुँदा भण्डारीले जागिरबाट हात धुनुपर्यो ।’
२०७४ कार्तिकमा नेपाल टेलिकमले फोरजीका कोर, कोरवान र नेटवर्क टु भनिने तीन छुट्टाछुट्टै प्याकेज खरिदका लागि विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा कोर नेटवर्क जडान गर्न ह्वावेई टेक्नोलोजिज् र जेडटीई कर्पोरेसन तथा सिंगापुरको माभेनिर एण्ड सिटियस कन्सोर्टियमले बोलपत्र दर्ता गरेका थिए ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी
जसमा ‘नेटवर्क वान’ र ‘नेटवर्क टु’ मा चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र हङकङको सीसीएसआई (ह्वावेईकै छद्म कम्पनी) को मात्र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा थियो । कोरको ठेक्का रु.१ अर्ब ५७ करोडमा जेडटीईले पायो भने नेटवर्क वान र टुको ठेक्का करीब रु.१७ अर्बमा सीसीएसआईले पायो । जुन कामका लागि ह्वावेईले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, सोही प्रणाली नयाँ जडानका लागि उसको छद्म कम्पनीले चार गुणा बढी रकम पायो ।
यस्तोमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र उनकै निकट व्यक्ति डिल्ली अधिकारीको ठूलो हात रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । कतिसम्म भने युरोपेली दूरसञ्चार उपकरण बिक्रेता कम्पनी नोकिया, इरिक्सन लगायतले पनि बोलपत्र अनुसारको सामग्री दिने सम्बन्धी अध्ययन गर्न र प्रस्ताव बनाउन केही साता समय थप्न माग गरे पनि टेलिकमले दिएन ।
निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा
किन भने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा र टेलिकमका उच्च अधिकारी अर्बौंको टेन्डर सिमितहरुबीच प्रतिष्पर्धा गराएर अर्बौं कमिशन हत्याउन चाहान्थे ।
शुरुमा फोरजी महँगो भएको भन्दै टेन्डर प्रत्रिया रद्द गर्ने पक्षमा बाँस्कोटा देखिएका थिए । उनले केही प्राविधिकहरुबाट रु. चार अर्ब सस्तोमा फोरजीको नयाँ प्रविधि किन्न सकिने सुझाव समेत पाएका थिए । तर, त्यो उनको कमिशनको लागि बार्गेनिङ थियो । अन्तत : नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा आफू निकट डिल्ली अधिकारीलाई ल्याए । त्यसपघि २० माघ २०७५ मा सीसीएसआई र जेडटिईसँग फोरजी प्रणाली खरिदका लागि सम्झौता गरे ।
सम्झौताले नेपाल टेलिकम नै समस्याग्रस्त बनेको उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ । सीसीएसआईसँग भविष्यमा खटपट परे वा उसले जडान गरेका उपकरणमा समस्या आए उपकरणको उत्पादक ह्वावेईलाई दबाब दिन वा कारबाही गर्न मिल्दैन । किन भने सम्झौता नै गलत बाटोबाट भएको छ ।
फोरजीमा अर्बौं घाटा खाएर सम्झौता गरेको नेपाल टेलिकम गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुरै घाटामा गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु.१७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको टेलिकमले २०७५/७६ मा रु.९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको छ । गत वर्षभन्दा ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको टेलिकमकै वार्षिक प्रतिबेदनमा देखिन्छ ।
गत वर्ष ३९ अर्ब रुपैयाँ सञ्चालन आय गरेको टेलिकमले यस वर्ष भने ३६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्रै सञ्चालन आय गरेको छ । त्यस्तै गत वर्ष ४५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएको छ । यस वर्ष भने २ अर्ब घटेर ४३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सिमित हुनुपरेको छ ।
अहिलेको प्रणाली ह्वावेईको हो भने जडान हुँदै गरेको फोरजीको कोर प्रणाली जेडटीईको हो । बोलपत्रमै फोरजी परियोजनामा अन्तरसम्बन्धको दायित्व शर्त समेटिएको भए यो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
यसअघि थ्रीजी प्रणाली जडानमा पनि शुरूको शर्तलाई संशोधन गर्दै रकम थप्न चलखेल गरिएको थियो ।
हिरा लुटपाट घटनाका अभियुक्त सार्वजनिक : पेस्तोल, सञ्चार सेट, मेटल डिटेक्टर बरामद !
अन्तत : काठमाडौंमा एक नागरिकमा कोरोना भाइरस संक्रमण !
यी हुन् पुर्व संचारमन्त्री बाँस्कोटाको घरमा बम पड्काउने विप्लव कार्यकर्ता !
विमानस्थलको ५३ रोपनी जग्गामा रजाइँ गर्ने मलहोत्रा समुहले रु. ६ करोड भाडा नतिरेको खुलाशा !
नर्भिक अस्पताल भित्रै डा. जेपी जैसवालले विदेशी महिलामाथि बलात्कार प्रयास गरेको खुलाशा…!
२०७६ चैत १४
धादिङकी सुनिता लामा थानकोटमा मृत फेला ! (फोटोमा हेर्नुहोस्)
‘लक-डाउन’का कारण गोदाममा तरकारी कुहियो, ब्यापारी चिन्तामा !
अन्ततः नेपाल भ्रमण बर्ष–२०२० स्थगित, अब भ्रमण बर्ष घोषणा नगर्ने पर्यटनमन्त्रीको उद्घोष !
घरधनीलाई अर्थमन्त्रीको अपील : यस्तोबेलामा एक महिनाको घरभाडा छुट दिनुस्, हामी तपाईंलाई सहयोग गर्छौं’